ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ ဒေါင်လိုက်ခုံ မှအရည်အသွေးမြင့် ဒေါင်လိုက်ခုံ ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. တစ်ဦးပို့ကုန်-oriented ကုမ္ပဏီပေးနေ ဒေါင်လိုက်ခုံ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာပါ။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံမှရှိသည် Taiwan။ စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းနှင့်အတူဝါယာကြိုးများနှင့်ဝါယာကြိုးကွက်၏ client ကိုမျိုးထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာဒီလုပ်ငန်းမှာ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်းတွင်ပါဝင်နေသည်။
၀ န်ထမ်းအားလုံးသည် ၀ ယ်သူတစ် ဦး စီကိုအကောင်းဆုံး ဒေါင်လိုက်ခုံ ၀ ယ်သူများသည်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းအားတွင်အမြတ်ပိုရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်များပြီးရောင်းအားအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ဈေးနှုန်းများကိုပေးလိမ့်မည်။
ပုံစံ - VL-800
ဖွဲ့စည်းပုံကို CATIA CAM နှင့် FEA တို့ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်(Finite Element Analysis).
လုပ်ငန်းစဉ်သည်မြင့်မားသောဂျီ ometric မေတြီပုံတိကျမှုနှင့်မျက်နှာပြင်ဖြတ်တောက်မှုကိုသေချာစေသည်.
X/Y/Z ဝင်ရိုးခရီးသွား:800/450/၄၈၀ မီလီမီတာ
Spindle နှာခေါင်းကိုစားပွဲမျက်နှာပြင်သို့:၁၀၀-၅၈၀ မီလီမီတာ
X/Y/Z Ball ဝက်အူများ: Ø32x12 မီလီမီတာ
Servo မော်တာ(X/Y/Z):၁.6/3/4 kw
X/Y/Z ဝင်ရိုး:၃၀/30/၃၀ မီလီမီတာ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/vertical-lathe.html
အကောင်းဆုံး ဒေါင်လိုက်ခုံ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် ဒေါင်လိုက်ခုံ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ